Uxolo ... | Kusuka kuLinux
Ngezikhathi ezithile siyawenza amaphutha. Lapho senza lokho, kufanele ukuxolisa, ukulungisa amaphutha, nokuthatha izinyathelo zokuqinisekisa ukuthi aziphindi zenzeke.
Ngesonto eledlule othile ku-Canonical udidekile ngokuhambisa impendulo okungeyona enkingeni yophawu lwentengiso ngaphandle kobubanzi bezimpendulo esivame ukuzithatha. Lokho kubhekwane nakho, futhi kuthathwa izinyathelo zokunciphisa amathuba okuthi iphinde yenzeke.
ngakho kuqala iposi elide lokuxolisa kaMark lapho iningi lokuthunyelwe lichithwa khona kuchazwa ukuthi izingqinamba zophawu lwentengiso yakhe zisebenza kanjani, nokuthi icala le fixubuntu kwakusemthethweni ngokuphelele kubo ukuthi basebenzise igama ubuntu nelogo yalo (kuvunyelwe amasayithi wokubhuqa noma wezikhalazo ngokusho kwalezo zinqubomgomo), yize umdali wayo engashongo ukuthi isiza besingakhulumeli iCanonical noma Ubuntu. Ukuthi uma befuna abanecala ku-Canonical, ukuthi bayinqubomgomo yabo yezimpawu zokuhweba nokubulawa kwabo. Futhi uma basenalo ithoshi elikhanyiselwe ukumfaka ku-lynch, bayazibuza ukuthi ngabe bangenza okufanayo yini uma bekuyimbungulu kulayini wekhodi kolunye lwezinguquko eziyizinkulungwane ezenziwe ngenyanga yiqembu elikhulu kakhulu.
Kepha ubuye ashiye indawo ayoxolisa ngenye impikiswano yakhe.
Ngenze iphutha lapho ngisebenzisa i- «iphathi lomthombo ovulekile wetiye»Ukubhekisa ekuhlaziyweni okungekho kwezobuchwepheshe komsebenzi weCanonical. Kwakungadingekile futhi kucasula ngokufanayo kuwo womabili amalungu eQiniso leTiye kanye nabagxeki abangewona obuchwepheshe bomsebenzi weCanonical.
Ukugxekwa kwezobuchwepheshe kwesoftware yomthombo ovulekile kuyingxenye yalokho okwenza isoftware yomthombo ovulekile ibe yinhle kakhulu. Kuyamukelwa futhi kwaziswa kakhulu eCanonical […] Akukho engikushilo okuphakamisa ukuthi angiyamukeli impendulo yezobuchwepheshe, kodwa abanye bacabanga ukuthi ngikuchithile konke ukushiyeka kubandakanya imibono yezobuchwepheshe. Akunjalo, bengikhuluma ngokugxekwa kwesoftware okungagxilwe kusoftware uqobo, kepha kunhlanganisela yezisusa zabantu abayibhalile, noma ilayisense yamahhala ethize eyashicilelwa ngayo, noma izinqubomgomo zenkampani , noma ubuzwe benkampani. Ngaphandle kokuthi ukugxeka kugxile ekwenzeni ngcono isoftware okukhulunywa ngayo, kufana nokumosha isikhathi sabantu ukuzama ukuthuthukisa leyo software. Lokho kumosa isikhathi yilokho ebenginakho emqondweni lapho ngiphawula lokho; kodwa-ke, bekungukusetshenziswa okungacabangeli kwelebula elingasebenzi. Sicela wamukele ukuxolisa kwami ​​uma beningabagxeki besoftware yeCanonical futhi nikhubekile.
Ngibheke ku-Google + ukuthola imibono yabanye abacasuliwe, nokuthi angifuni ukuhumusha kanjani. Lapha nginezo U-Aaron Seigo y UMartin Gräßlin
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Uxolo…
Okungenani bekungukuzivocavoca okunempilo nokusebenziseka kahle ekuboneni abalandeli. 🙂
Hhayi, kukhona labo abaqhubeka "ngaphandle kokubona ukuthi wenze okungalungile okuyi-canonical."
Kubonakala kimi ukuthi uMark S. akufanele abe kulezi zinto zomhlaba, athathe isikhundla sakhe: leso se-CEO. Cishe akekho umholi wesoftware (ngokujwayelekile) obonakala ethumela kumabhulogi / kumanethiwekhi omphakathi, futhi kufanelekile ukuthi ungalwi nabasebenzisi futhi wakhe isithombe esibi. Ngivele ngenzeka nge-linus T nengxoxo yakhe nomqambi wohlelo. Kuzona zozimbili lezi zigameko, ama-troll, abazondayo nabalandeli beqa izinhlangothi zombili. Futhi akekho onqobayo, okuwukuphela kwento abayikhiqizayo ukuthi kukhona izinhlangothi ezilwayo nokuthi iwindowsero ebabona ngaphandle ayithandi umkhathi bese ibaleka.
ngiyaxolisa @staff bekungeyona impendulo kumazwana akho
Ngicabanga ukuthi uMark usevele wabona ukuthi akamuhle kakhulu nokuthi inkampani yakhe nayo, kepha noma exolisa kakhulu kusuka emazinyweni kuya ngaphandle, unuka kabuhlungu ngendlela ebabazekayo kangangokuba lapho uyithatha ayizonde emphakathini we-linux noBill Gates noSteve Jobs kunjalo, emkhakheni wakhe ophansi kakhulu futhi otholakala kuyo yonke indawo.
hehe, asinalo ubandlululo, huh? 😉
Ngicabanga ukuthi isenzo esihle kakhulu ukuphuma siyocacisa futhi sicele ukuthethelelwa
I-MEnudo soap opera !!!!!
Inja ephendukile iyabuya,
ngokubukeka kwabo kuthambile,
nomsila phakathi kwemilenze ... »
Leyo ekaChavo. Kuhle.
Ekugcineni umuntu othole ihlaya.
Kubukeka sengathi nina baseSpain anikaze nimbone uChavo.
U-El Chavo wafika eSpain, kodwa sekwephuze kakhulu.
kepha bakonakalisile ngaleyo ndlela "njengombhedo", njengoba benzile ngokuthwebula ama-movie amaningi.
ngaphandle kokungabaza isiLatin iSpanishi iyona ehamba phambili
Ngokwayo, i-El Chavo del ocho ingeyokudabuka eMexico, futhi njengamanje ingeyeTelevisa. Ukuthi ifika nokuphindwa kabili okungazihloniphi izingxoxo zokuqala ngokuthi "ikuthole", kungenye into.
@Mauricio, angikhumbuli ngibona uchungechunge noma ama-movie wemvelaphi yaseLatin American ebizwa ngeSpanishi evela eSpain (ngaphandle kwamafilimu agqwayizayo) futhi kubonakala kuyinto ejwayelekile kimi. Kungani ugoqa uma uyakuqonda abakushoyo.
Leyo Spanish yaseLatin iyona ehamba phambili… Kungumbono ongalindeleka womuntu ongakhulumi iSpanishi eSpain.
Angazi ukuthi kungani ngangifuna ukumangalela leyo webhusayithi ukuthi iyeke ukusebenzisa igama ubuntu uma ubuntu kuyigama lase-Afrika, kufana nokuthi ngibhalisa igama elithi ubungani
Uma kungenjalo? Okwenziwa okuthe xaxa yi- "Windows" noma "Apple" kodwa sinjalo.
Kulungile, kuningi engikwenzayo, kuyinto engajwayele ukwenziwa kulempilo.
Isinqumo esihlakaniphile ngasohlangothini lukaMark. Uma kukhulunywa iqiniso, into yophawu lokuhweba kwakuyiphutha elikhulu kakhulu.
Sengivele ngibolile kusuka kulesi silima se-opera saseMexico noma saseVenezuela.
Angiyiboni inkinga ukuthi i-CANONICAL ithuthukisa i-MIR uma ilayisense ephelele ingu-GPL, njenge-UNITY.
ICANONICAL inelungelo lokuthuthukisa i-MIR ngokusatshalaliswa kwayo futhi lokho akusho ukuthi iyithuthukisela okunye ukusatshalaliswa onekhodi etholakalayo.
Ngaphezu kwalokho, ngizwe abantu abaningi bethi i-BOYCOTT ephikisana neCANONICAL, nokuyinto eyisiphukuphuku engake ngayizwa.
Ngikuqonda kahle. Futhi, akuwona wonke umuntu oqondayo ukuthi kwenzekani ngempela emphakathini we-Ubuntu.
Umphakathi we-Ubuntu unobungani obuncane kuneminye imiphakathi yeLinux yize iningi liyiWindows. Futhi ngendlela, inguqulo ye-Ubuntu engiyithanda kakhulu yi-Ubuntu Server (ngenxa yokungabikho kwesikhombimsebenzisi sokuqhafaza kanye nokulula kokufaka noma isiphi isikhombimsebenzisi osifunayo, kunjalo).
Kukhona i-iso ye-Ubuntu Minimal (hhayi iseva) yokuthi wakhe uhlelo lwakho kusuka phansi, isitayela se-Arch.
Ah kuhle. Ngizolanda leyo nguqulo ukwenza uhlobo lwami lwe-Ubuntu (yize i-Arch ishaya kwezinye izinto eziningi, njengomphathi wephakeji lendabuko).
Kulula kakhulu, wonke umuntu unenkululeko yokugxeka noma yini ayifunayo, futhi uma umphakathi ubona ukuthi ukwakhiwa kwe-mir, kungashiya i-wayland ngaphandle kokusekelwa kwemidlalo noma yini, banelungelo lokugxeka, ngaphezu kwami ​​ngiyazi.
ICanonical ayiphoqi muntu ukuthi asebenzise iMIR (GPL).
Uma i-MIR ishiya iWayland ngaphandle kokuxhaswa kwegeyimu noma yini, inkinga yeCanonical, akekho umuntu ofaka isibhamu ekhanda lakho ukusebenzisa iMIR noma Ubunye. Ukuba khona kwe-MIR akusho ukuthi iWayland ayisekho.
impendulo yakho ayinangqondo, uma i-MIR ishiya i-wayland ngaphandle kokusekelwa komdlalo noma abashayeli abavaliwe, noma kunjalo inkinga ikumphakathi, okuzofanele uzulazule manje ~~
Angicabangi ukuthi uGabe Newell unendaba ngempela nokusetshenziswa kweMIR emidlalweni yevidiyo, ngoba, yize iSteamOS isuselwe ku-Ubuntu, ayidingi ngempela ukuthi iMIR isetshenziswe kunoma yimiphi imidlalo yevidiyo ye-GNU / Linux noma isebenze ngokufanayo Intuthu. Wayezokhothama kalula eWayland futhi inkinga ixazululwe.
Ngamanye amagama: ozofanele aqumbe uMark Shuttleworth (i-Intel isivele iyishayile isiphakeli sayo semifanekiso).
IPandev92 umphakathi ungakhetha iWayland ngomoya ophansi, sengivele ngakutshela …… IWayland neMir ngamaphrojekthi ahlukile ezindleleni ezahlukahlukene …… imfoloko eyodwa kweziningi ezikhona kwisoftware yamahhala…. Asikho isidingo sokubanga umsindo ngale ndaba.
Ngaphezu kwalokho i-INTEL neREDHAT sebesithathile isinqumo sabo.
ICANONICAL izoba nomsebenzi omningi ngaphambi kwayo.
Ake sibone, angazi noma udlala isimungulu yini noma yini .., kepha bekukhona abashayeli abaphethe i-wayland, yini ukusetshenziswa komphakathi onquma i-wayland (into esivele yanqunywa ngaphambi kokuba i-Mir ibekhona kuphela)? ngathi bekungeke kube nabashayeli, noma ngabe banqume malini, futhi bengizobabheka kuphela (ngiyaqagela kakhulu):
Ngiyakutshela, udlala isimungulu noma yini? ..Uvele uzinike impendulo yakho… .Ukhuluma unomphela ngokuqagela… ukucabanga kwenzeka enhlebo yangakini… Uphupha nge-crystal ball yakho, manje usuyinsabatheka… .. Ngikhuluma ngamaqiniso futhi ngiyabeka isinqumo esenziwe yi-INTEL neRED HAT esisekela iWAYLAND…. okuyiqiniso elibambekayo …… .. Manje uma iCONONICAL ifuna ukuqhubeka ne-MIR nephrojekthi yayo inelungelo lokuyenza ……. Njengomuntu omuhle ngithemba ukuthi izofinyelela ezinhlosweni zayo zesikhathi esizayo nokuthi i-INTEL nayo izokwazi sekela i-MIR ngaphandle kweWayland ... ngithemba ukuthi isebenza njengokucaciswa.
Vele, iCannonical inelungelo layo lokuthuthukisa i-MIR uma ifisa. Kepha i-KDE, i-gnome ne-QT nazo zingaphakathi kwamalungelo abo wokungayisekeli uma bengenasithakazelo.
Inkinga ukuthi, kuMark Shuttleworth, ukuthi abafuni ukumeseka kuyinto ethile yezepolitiki futhi bayiphathi yetiye.
Ngisho ukuthi, ngiyakwazi ukwenza engikufunayo, kepha kuzofanele wenze lokhu engikushoyo. Lesi yisisekelo sengxoxo.
imisebenzi ye-steve kusho
USteve Jobs wayengeke axolise
Phendula ukuthola imisebenzi
Ngisho noSteve Ballmer ngabe uxolisile. Kusukela eMisebenzini, kuze kube manje, akakaxolisi kunoma ngubani (ukuthethelela, ngaphansi). Ngisho esembhedeni wokufa, akazange axolise ngisho nokuxolisa.
Kepha uMark hhayi uSteve, uMark ungumphakathi, ungumnumzane. Ukuxolisa akumenzi angabi yindoda, ungomunye walabo abakwaziyo ukuxolisa uma sebebonile ukuthi benze iphutha.
Ekugcineni lezi ezimbili ziyizikhangiso ezinkulu kakhulu zenkampani eyenza inzuzo. Ngokwazi kwabo kungabonakala ...
Angazi ukuthi ngubani owayezoxolisa futhi ngubani ongazange (futhi ezimeni ezinhle kakhulu, labo abangasekho phakathi kwabaphilayo futhi abangabala) kepha kubalulekile ukuthi balibonile iphutha, futhi ngaphandle kokuvumela iminyaka idlule .
Njengoba beseshilo ngenhla, ukuzivocavoca okuhle ukuthola abalandeli.
UTina Toledo kusho
"... othile eCanonical wenze iphutha ..."
Enkampanini efana no "othile" oyi-Canonical, ngoba nje, yebo, "banephutha" ngokuqalisa usongo lokuthathelwa izinyathelo zomthetho - nokungeyona into - kanti i-CEO - uJane Silber - wayengazi nhlobo ngakho?
Hhayi-ke ... sidinga nje ukutshelwa ukuthi kwakuyintombazane ereception.
Enye yezinto ezimbili - futhi zombili lezi zinto zimbi kakhulu -: kungaba uShuttleworth ukholelwa ukuthi abantu bayiziphukuphuku noma eCanonical wonke umuntu wenza lokho akufunayo ngaphandle kokubonisana nabaphathi bakhe.
Phendula uTina Toledo
Cishe kuyindlela yesibili. Izikhathi eziningi, abasebenzi benza izinto ngemuva kwabaqashi babo.
ICanonical ibingasekeli uKubuntu isikhathi eside.
UKubuntu uhlala ebonga ngokuzimela kubathuthukisi bayo.Kulowo mqondo uMartin Gräßlin, kudala wayenesikhundla sakhe ngaphandle kweCanonical.
Ngingumqashi, futhi kuyinto eyodwa ukuphatha abantu kahle nokuqonda ukuthi noma ngubani angalenza iphutha ... noma amabili, noma amathathu ... noma yini oyifunayo futhi oyithumelayo, kodwa kungenye into yokuthi bangaphula umthetho imigoqo.
Ukuthumela isaziso samasamanisi asemthethweni akuyona into encane. Akuyona into enikezwe noma yimuphi umsebenzi futhi, ngokujwayelekile, labo abaphethe le misebenzi yiminyango yezomthetho engasebenzi ngaphandle kwemvume yomkhandlu -kulesi simo- noma umnikazi wenkampani.
Ukuxolisa kukaShuttleworth kwamukelekile, kepha kimi kubonakala sengathi akathembekile ngokuphelele futhi angicabangi ukuthi ubengasazi leso sixwayiso sokuthathwa komthetho. Akunakwenzeka ngomuntu onjengoMark ukuthi angakunaki okwenzeka enkampanini yakhe.
futhi uma ubheka lokho iCONONICAL iyeke ukutshala imali ekuthuthukiseni uKubuntu.
UMark Shuttleworth akakwazi ukukhuluma futhi akanakho ukuphazamiseka okuningi ngoKubuntu nabathuthukisi bayo abagcina i-distro ngokuzimela kweCANONICAL.
Vumela uMark omdala abole
Ngemuva nje kodweshu lwesidleke sonyanga, angazi ukuthi kungani kodwa ngifunde isihloko ngephimbo lengane ithethiswa ngokuphula ingilazi ...
Iresiphi yami yokuthola i-Ideal Distro
Inkambo eku-inthanethi ye-HTML5 neFirefox OS